समाचार | गृहपृष्ठ | Page 2255
वैशाख ११, काठमाडौं (अस) । धादिङको नौबिसे केन्द्रबिन्दु भएर ५ दशमलपव २ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ । बुधवार बि...
बदर नागरिकतामा सरकारलाई सर्वोच्चको प्रश्न : २०५८ सालको आदेश कार्यान्वयन भयो कि भएन ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०५८ सालमा अमान्य भएका नागरिकताको आधारमा अन्य व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने काम...
स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा सरकार : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकार स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्...
म्यान्माले अड्कायो हिमालय–२ हवाई मार्ग
काठमाडौं । नेपालको आकाश हुँदै अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्न सकिने हिमालय–२ रूट म्यान्मा (बर्मा) का कारण अन्योलमा पर...
काठमाडौं । आगामी बजेटमा चालू खर्चको आकार घटाउन र अनावश्यक रूपमा राजस्व दर नबढाउन सरकारलाई अर्थविद्हरूले सुझाव...
पुनर्निर्माणका लागि थप रू. ४२९ अर्ब आवश्यक
काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि थप करीब रू. ४२९ अर्ब आवश्यक पर्ने भएको छ । पुनर्निर्माण र पुनःस्थाप...
एनसेलको रीटमा सुनुवाइको पालो आएन
काठमाडौं (अस) । ठूला करदाता कार्यालयले लगाएको कर सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत भएको दाबीसहित एनसेलद्वारा दायर भ...
गोरखाको घैरुङ र घ्याल्चोकमा बुथ कब्जा
on: ५ मंसिर २०७०, बुधबार ००:०० समाचार
मङ्सिर ४, गोरखा (अस) । एकीकृत नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले गोरखाको क्षेत्र नं १ को घैरुङ गाविसस्थित बास्कोट र घ्याल्चोक गाविसका मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा गरेका छन् । मतदानका लागि बसेका मतदात...	बिस्तृतमा
यसपटक संविधान बन्छ : पौडेल
मङ्सिर ४, तनहुँ (अस) । नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले यसपटकको संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने बताएका छन् । तनहुँको दमौलीस्थित सत्यवती उच्च मावि मतदान केन्द्रमार्फत मतदान गर...	बिस्तृतमा
रूपन्देहीमा ७० प्रतिशत मत खस्यो
मङ्सिर ४, रूपन्देही । रूपन्देहीमा संविधानसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । सातैओटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदानका क्रममा कुनै अप्रिय घटना नभएको स्थानीय प्रशासनले जानकारी दिएको छ...	बिस्तृतमा
धनकुटामा उत्साहजनक सहभागिता
मङ्सिर ४, धनकुटा (अस) । धनकुटामा संविधानसभा निर्वाचन उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको छ । धनकुटाको दुईओटै निर्वाचन क्षेत्रका ३५ गाविस र एक नगरपालिकाका १ सय ३८ वटा स्थायी र चारओटा अस्थायी गरी १ स...	बिस्तृतमा
कास्कीमा २०६४ को तुलनामा १२ प्रतिशत बढी मत
पश्चिमाञ्चलमा ७२ प्रतिशत
२०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनको तुलनामा यसपटकको निर्वाचनमा मतदाता बढी उत्साहित रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीको भनाइ । मङ्सिर ४, पोखरा । कास्कीमा २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनको...	बिस्तृतमा
मुस्ताङमा चिसोका कारण कम मत
मङ्सिर ४, बेनी (अस) । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा ६४ प्रतिशत मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मुस्ताङले जानकारी दिएको छ । चिसोका कारण उपल्लो मुस्ताङका मतदाता तल झर्ने भएकाले तुलनात्मक रूपम...	बिस्तृतमा
दाङ र सल्यानको चुनाव शान्तिपूर्ण
मङ्सिर ४, दाङ । संविधानसभा सदस्यका लागि मङ्गलवार भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको मतदान प्रक्रिया दाङ र सल्यानमा शान्तिपूर्ण अवस्थामा सम्पन्न भएको छ । पा“चओटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको...	बिस्तृतमा
विपन्न परिवारका बालबालिकामा कुपोषण
मङ्सिर ४, कञ्चनपुर । विपन्न परिवारका अधिकांश बालबालिकामा पोषणयुक्त खानेकुराको कमीका कारण कुपोषणको समस्या देखापर्न थालेको छ । कुपोषित हुने अधिकांश बालबालिका ग्रामीण क्षेत्रका दलित र विपन्न सम...	बिस्तृतमा
वेबसाइटबाटै निर्वाचनको नतीजा
मङ्सिर ४, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मङ्गलवार सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको नतीजा आयोगकै वेबसाइटमा उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी सर्वसाधारणको जिज्ञासालाई तत्काल...	बिस्तृतमा
निर्वाचन शान्तिपूर्ण : पर्यवेक्षक
मङ्सिर ४, काठमाडौं । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको पर्यवेक्षणमा संलग्न विभिन्न संस्थासम्बद्ध पर्यवेक्षकहरूले बताएका छन् । नेकपा–माओवादीलगायत ३३ दलीय मोर्च...	बिस्तृतमा